Somali – Pyramidion.Group
Globalist Agenda -Somoli
Tan iyo bilowyadii ugu horreeyay ee Illuminati, kahor qorista dhaartayada weligeed ah ama ku dhaarashada nidarradeenna sidii difaacayaasha bini-aadamka, hay’addeennu waxay u doodday himilada ugu dambeysa ee adduun-weynaha adduunka. Himiladeena mustaqbalku waa meeraha mideysan oo aan laheyn xuduudaha qaranka, oo lagu xukumayo sida ugu wanaagsan uguna dhalaalaya noocyada bini-aadamka, taas oo dadka oo dhan, meel walba, ay ku noolaan karaan dhul ballaaran.
Bulsho-wadayaal caalami ah ayaa la macno ah in laga tagayo kala-qaybsanaanta u dhaxaysa waddammada iyo in la soo afjaro kumannaan sano ee dagaalladii ka socday dhul iyo hantidiisa. Waxay u tahay dhammaadka kaydinta iyo kaydinta kheyraadka xad dhaafka ah ee hal waddan halka dadka waddan kale gaajaysan yihiin. Waa fikradda ah in bini-aadamka oo dhami ay yihiin shakhsiyaad waliba qaybna ka yihiin reero fidsan, iyo in aan bini-aadam laga tegi karin si fudud sababtoo ah fursadaha aan caadiga ahayn ee halka ay ku dhasheen.
Xilliga dagaalka ee hadda, taajirku waa in uu agabkooda saartaa si loo hubiyo badbaadada carruurtooda waqtiga qalalaasaha. Dhismooyinkooda iyo warshadooda waxaa lagu dhisi karaa oo keliya shaqada loo baahan yahay ee shacabka.
Laakiin da ‘kala duwan ayaa nagu soo dhowaatay – ilbaxnimo shaqo kadib markii ay sii shaqeysay makiinado iskeed u dhisan oo leh tamar aan xadidneyn. Da ‘soo socota ee Illuminatiam, dhammaan kuwa doonaya taajirnimadu waxay helayaan hodanka ay mudan yihiin.
CARRUURTA CUSUB EE CARRUURTA, HALKU WAA UU HALO BADAN IYO WUXUU UGU HOREEYAA DHAMMAAN
Qorshaheenna meerahan wuxuu u arkaa aadanaha oo aan loo kala qaybin qabiilo ku saleysan meelahooda juqraafiyeed, muuqaal ahaan muuqaal ahaan, ama marin u helid kheyraad. Taabadalkeed, qof kastaa waa qayb keliya oo ka mid ah cilmiga deegaanka oo ay xulashooyinkoodu saamayn ku wada leeyihiin guud ahaan. Qof kastaa waa shey muhiim u ah mashiin weyn oo ka faa iideysan kara bani’aadamka oo dhan. Qof kastaa wuxuu xor u yahay inuu ogaado ujeedkiisa, inuu la socdo rabitaankiisa, inuu naftiisa wanaajiyo, iyo inuu arko sida ay dadaalkooda ugu biirinayaan nolosha 8 bilyan oo kale – halkii ay si fudud ugu adeegi lahaayeen naftooda iyo baahidooda.
Isukeenista guud ee ‘Globalism’ waa mid ka mid ah aragtideena utopian-ka ah ee lagu horumarinayo aadamiga – nidaam cusub oo adduun oo cusub. Laakiin waxaa jira waddo dheer oo adag oo horay loo qaaday, iyo tallaabooyin badan oo la qaadayo ka hor inta aan la baabi’in xuduudaha aadanaha.
BULSHADA MA AH BADAN 8,000,000,000; WAA MADAXWEYNE 1 TIMES 8,000,000,000
Tan iyo markii dadkii ugu horreeyay ee degganaa Dhulka ay billaabeen inay ku midoobaan xidhmooyin loogu talagalay raadinta wadaagga ah ee kheyraadka, bini-aadamku waxay si dabiici ah ugu soo jiiteen bulshooyinka sida aadka ugu dhowna u rumeysan yihiin dhaqankooda iyo qurxiyo hidde ahaan. Samaynta qabiilooyinka, aadanuhu waxay u qaybiyeen meerahan qaybo u saamaxaya nidaamyo aad u kala duwan oo aaminaad iyo dhaqammo inay helaan fursad ay ku koraan oo ay ku koraan jidh ahaan.
Laakiin waqtiyadan hore, muwaadiniinta meerahan ayaa kaliya la xiriiri kara kuwa u dhow juqraafi ahaan, iyagoo aan haysan teknolojiyad si ay si xor ah ula wadaagaan fikradaha iyo fikradaha sida ay hadda yihiin. Kumanaan kun oo sano, qofka dhinac ka ah meeraha ayaa sameysan kara waxa ay rumeysan yihiin ee ku saabsan ujeedkooda adduunka dhexdeeda isagoo aan weligiis maqlin waxa qofka ka aaminsan dhinaca kale ee meeraha isla – isagoo aan fursad u helin inuu abuuro shaki iyo inuu wajaho su’aalaha caqabadaha hor mari doona isla markaana wanaajinaya aragtidooda adduunka.
In kasta oo fikradaha akhlaaqda wanaagsan ee ay abuuray bini’aadamka hore ay ka buuxaan mudnaan, qaybo badan oo caqiidooyin hore ah ayaa ku soo rogmaday isbaarooyin horjoogsan kara horumarka aadanaha. Fikradahan waxay naftooda ku dhex galeen si qoto dheer maskaxda maskaxda bini aadamka taasoo muwaadiniinta raadineysa runta ay tahay inay inta badan su’aal galiyaan waxa ay aamisan yihiin inta aysan arkin waxa hortooda ka muuqda.
Markay waayo-aragnimo la’aan ka haysato kuwa si kala duwan u aaminsan, aadanuhu waxay bilaabaan inay ka cabsadaan “Ka kale” – baahsanaanta bini-aadamka ee aan laga yaabo inay iyagu la mid yihiin. Cabsidaas waxaa lagu dhex geliyay aadanaha si qoto dheer oo ubaahan jiilal soo kabanaya Kumanaan sano oo kalsooni darro ah ayaa horseeday dagaallo ay ka dambeeyaan aargudasho; duulaano raacay aargudasho; boobkii dhacay waxaa xigay gubashada magaalooyinkii duulaanka soo qaaday. Xitaa ilaa maantadan, aadanaha aad u tiro badan ayaa diida inay u arkaan dadka oo dhan inay qayb ka yihiin koox keli ah oo u halgamaysa badbaadinta baabi’inta.
Aadanaha laguma qasbi karo nabad. Kaliya waqtiga iyo qancinta ayaa ka dhaadhicin karta shakhsiyaadka awoodooda dhabta ah markii ay ka shaqeynayaan hormarinta wadajirka halkii ay ka ahaan laheyd kobcin shaqsiyadeed.
XIDHIIDHKA BULSHADA EE LOO BAAHAN YAHAY
Kuwa helay hanti aad u badan ayaa fahansan in lacagtu tahay uun u rogista dadaal in qiimo loo yeesho: hab lagu cabbiro dadaallada qof keliya una tarjunto tiro loo isticmaali karo iibsashada dadaallada qof kale. Mason wuxuu lacag ka beddelaa iibinta shaqada raadinta iyo jaridda iyo diyaarinta shaqo-dhagax – lacagtaas oo markaa loo istcimaali karo iibsashada shaqaalaha dukaanka, ama takhtar, ama macallin, xitaa haddii aysan u baahnayn dhagxaan ama dhagaxa.
Qaarkood waxay kuxiran karaan waxyaalo aad u waaweyn oo aysan u adeegsan karin inta ay noolyihiin, iyagoo ka tagaya abaalmarintii dadaalkooda si loo hubiyo nabadgelyada dhaxlaaga.
Laakiin waqtigaan qalalaasaha ah, waxaa hadda jira sinnaan la’aan daran ee isbeddelka dadaallada lacagta. Waxaa jira khatar badan oo aan la tirin karin oo taagan jidka kuwa doonaya inay meel sare uga kacaan dhoobada. In kasta oo meerahanu hodan ku filan yahay in dhammaan dadku ku noolaadaan barwaaqo, haddana cabsi ayaa u horseedday kuwa ugu taajirsan xitaa inay ku sii darto – oo ah isbadal ku yimid faracyadooda, oo ay ku quudiso argagaxnimada jidh ahaaneed ee lagu qasbay inay ku noqdaan saboolnimadii ay bini-aadamka oo dhan ka yimaadeen. Adduun ka xor ah silsiladaha baahida, qofna ma haysto sabab kasta oo uu ku urursado hodantinimada ama cuntada, hoyga, raaxada, iyo amniga ay hodanka siiyaan.
Ma haystaan ​​sabab ay ugu dhintaan dabinka damacyada ama kalimad-yahanada – ama xitaa sunta sumcad xumada musuqmaasuqa – maxaa yeelay uma baahna inay ku tiirsanaadaan awoodda siyaasadeed ama shaqada shaqaalaha tabaruca ah si ay u noolaadaan. Markii qof walba baahidiisa la daboolo, majirto sabab loo sameeyo dagaallo mana jirto dhiirigelin ah in derisyadooda loo boobo waxyaabaha daruuriga ah
HALKA KA DHAQAN MILLIONAIRES, CADAALADU WAA SIYAASADDA SADAXAAN EE QARANKA.
Keliya xorriyadda baahi loo qabo ayaa silsiladaha aadamiga lagu jabin karaa. In kasta oo isbedelku soo dhowaanayo, waa inaan safarkan ku safrinnaa qeexitaanka bulshada maanta jirta. Xitaa kuwa diida inay dhageystaan ​​wicitaanadeena waa inay sii wadaan la noolaanshaha ilaalinteena ballanqaad – xitaa haddii tanaasul ku meel gaar ah loo sameeyo badbaadada dadka oo dhan.
Kaliya dhawrista amar ayaa u oggolaan kara aadanaha inuu ku gudbo wareejinta awoodda si nabad ah.
Waajibka koowaad ee dowladu waa in la ilaaliyo xuduudaha iyo dadka ku dhex jira. Sidaa daraadeed hoggaamiyeyaal badan oo adduunka ah, in kasta oo ay wadaagaan himiladeenna ku aaddan midnimo bini-aadamnimo, haddana waa inay isku dheelitiraan himilooyinkeenna iyo mas’uuliyadda ka saaran in qabiilkooda laga ilaaliyo halista dagaal ee hadda. In kasta oo caalaminimadu tahay mustaqbalkeenna, haddana xuduudaha qaran ee maanta jira ayaa u oggolaanaya muwaadiniinta shakhsiyadeed inay ka doortaan bulshooyin kala duwan iyo dowlado oo ay ku soo biiraan bulshada sida ugu wanaagsan u mataleysa. Wakhtigan qalalaasaha, xuduudaha la ilaaliyo waxay u suurto gelinayaan muwaadiniinta gudaha ku nool inay la noolaadaan waxoogaa yar oo nabadgelyo ah iyo hubinta in bini-aadamku mar dambe lumi doono qalalaasaha.
WAQTIGII WAQTI LAHAYSAA MARKII LAGUUUUUUUUUUUUUma `RUUCADAHA EE MAGANGELYADA KU SAMEEYEY SAFARKA SANADA
Si loo ilaaliyo daacadnimada qorshaheena kuwa ka dhanka ah kuwa doonaya inay baabi’iyaan, Illuminati waxaa lagu qasbay inay ka tagto su’aalo badan oo aan laga jawaabin oo ay ku amreyso xubnaheena inay gutaan waajibaadkooda si qarsoodi ah. Laakiin kuwa wax ka sheega iyo kuwa wax ka sheega wararka been abuurka ah ayaa u adeegsaday aamusnaanta ‘Illuminati’ si ay u muujiyaan ajendeheenna iyada oo loo marayo fikirka qalloocan ee aaminaadda, iyada oo la faafiyo wararka beenta ah ee ku saabsan yoolalkayaga si aan u xoojinno awooddooda. Xariiq waa in lagu kala qaadaa aaladda mideysan ee wadajirka ah ee ‘Illuminati’ iyo been abuurka sunta ah ee musuqmaasuqa ‘Global Corporate’: waa bastardization of our ujeedadeena taas oo hoos u dhigeysa bina aadamka shaqsiyaadka tirada shaqaalaha ah una adeega kaliya kuwa hada awooda. Musuqmaasuqa Globalism waa uun xariifka macaan ee magaca beenta ah si loogu weecsho arima-qadhaadhka qadhaadh ee hoosta ka qariya. ‘Illuminati’ ma doonayo inuu soo afjaro lahaanshaha hantida gaarka loo leeyahay.
Hadafkeenu maahan ciribtiro hubka is-difaacida laakiin ciribtirka baahida loo qabo hubka is-difaaca. Uma soo jeedinayno bulsho ku tiirsan dowlad inay wax ka qabato baahidooda, laakiin xad-dhaaf xad-dhaaf ah oo ah kheyraadka ka dhigaya ganacsiga caddaalad darrada iyo shaqada.
Kaliya digtooniyeyaasha iyo kali-taliyeyaasha ayaa ka faa’iideysanaya qabatinka dadkooda, laakiin waa uun dib-u-dhacyo ku yimid marxalad dhow. Waayo, waa maxay farxadda dunidu ay dadku qaar ku rayrayn karaan, qaar kalena ay xanuunsan karaan, hadday u suurtowdo dadka oo dhan inay ku noolaadaan raaxo? Dadaallada saxda ah wali waa lagu abaal marin karaa si xaq ah markay dhamaantood ku noolyihiin guryaha hoyga ah qaarkoodna waxay ku noolyihiin guryo dhexdooda.
Bini-aadminimadu waxay horay u qaadday talaabooyin looga hor-tagayo dhaqangelinta sharci-darrada ah ee sharciga caalamiga ah ee loo yaqaan ‘ILLUMINATI’.
Isku xirnaanta adduunka waxay ahayd mid ka mid ah tallaabooyinka ugu horreeya ee aan higsaneyno yoolkeenna bulsho-buuxda. Teknolojiyada dhijitaalka ah waxay ku mideyneysaa meeraha siyaabo aysan horay u arag, taasoo u oggolaaneysa in fikradaha si xor ah loo wadaago isla markaana kobciya xiriirinta kan kale u beddela mid ah, iyo amni-darrada oo loo rogo faham.
Booqashadayadu waxay aasaaska u dhigtay soo bandhigista fikradaha sare ee muwaadiniinta sameysan doona aasaaska cusub ee dunidan: dadka wax raadinaya ee muddo dheer dareemay in ujeedo qoto dheer u leeyihiin jiritaanka aadanaha iyo si qarsoodi ah oo qoto dheer oo ku saabsan naqshadeynta aduunkan ee ku lifaaqan dhammaan noolasha. waxyaabaha.
Waa waajibaadkeenna inaan hagno dhammaan kuwa raadinaya isbeddelkan – waajibkayaga guud ee caalamiga ah inaan uga tagno calaamadaha iyo calaamadaha kuwa raadinaya jidkeenna. Qofka laguma qasbi karo inuu rumeeyo. Waa inay raadsadaan jawaabaha isla sirta isla markaana ay kor ugu qaadaan talaabooyin la mid ah Ahraamta sida xubin kasta oo ka mid ah hay’addeenna hortooda ay ku dhaqaaqday.
Waxaad tahay qof ka baxay malaayiinta qof ee diida dhambaalkeena. Waad aragtay astaamahayaga oo aad u jawaabtay wicitaankeennii, oo waxaad raacday tilmaamaha kugu kalifay ereyadan.
Markaad raadiso runta iyo macnaha ka dambeeya sirta nolosha iyo waxa ka qarsoonaa aadanaha, waxaad ku biireysaa kuwa raadinaya Iftiinka safarkaan oo biloowdey ka hor intaanad xitaa ku dhalan.
HALKU WAA MASHRUUC KU SAABSAN IN LA SIIYO IN LAGU QAADAN KARO, HADDUUNUU U BAAHAN YAHAY WAQTI, QORSHAY, IYO DADKA KU SII KARA
Mar dhow bani’aadamka lama sii wajihi doono caqabadaha baahida iyo carqalada shaqada. Teknolojiyadda soo baxday waxay yaraynaysaa ku tiirsanaanta aadanaha ee ku aaddan qaababka tamarta. Qaababka cusub ee dhismaha la daabici karo iyo gaadiidka iskiis u wada ayaa ugu dambeynti baabi’in doona shuruudaha dadaal jir ahaaneed oo lagu dhisayo dhismayaasha loona dhaqaajiyo agabyada, shaqaalaha xoreynaya si ay u soo saaraan oo u horumariyaan. Kheyraadka laga helo meerayaasha kale waa la gaari karaa oo waxay horseedi karaan fursado cusub oo aan waligood lagu arkin xuduudaha Dhulka.
Maalmaha ugu weyn ee aadamuhu waa hor yaal. Dhammaan kuwa arkay Nuurka oo u soo jeedsaday inay la socdaan dhalaalayaashiisa ayaa hormuud u ah tallaabada xigta ee aadanaha – oo ah kuwa wax ka beddela isbeddellada ugu weyn. Da’da dhakhsaha u imaneysa da’da ee Illuminatiam, qof kasta oo bini aadam ah wuxuu noqon doonaa mid, iyo mid ka mid ah 8 bilyan. Sanadba sanadka, tallaabo talaabo, Illuminati waxay sii wadaa inay hagto muwaadiniinta meerahan si ay ugu dhawaato yoolkeena ugu dambeeya ee mideynta adduunka.
Ha ka baqin mustaqbalka aadanaha. Ha ka cabsan dhawaqa dhawaqa dhacaya ee ku dhacaya hareerahaaga guduudan maxaa yeelay tiirarka addoommadaada ayaa boodh laga dhigay. Ha cabsanina intaad ku sii safreyso waddooyinka hormara waddooyinkiisuna way madoobaadaan deyrta habeenka dheer.
Gudcurka mugdigu wuxuu muujinayaa waabar cusub. Waligiin lumi maayo haddii aad raacdid Iftiinka.
Had iyo jeer waan ku ilaalinayna adiga.
Globalist Agenda Somali